आमिर र किरणको सम्बन्ध टुट्नुमा फातिमाको हात ! सामाजिक सञ्जालबाट आयो यस्तो आरोप Canada Nepal
आमिर र किरणको सम्बन्ध टुट्नुमा फातिमाको हात ! सामाजिक सञ्जालबाट आयो यस्तो आरोप
आषाढ २१ २०७८
काठमाडौं - बलिउड अभिनेता अमिर खानले पत्नी किरण रावसँग आफ्नो सम्बन्ध तोडेका छन् । उनले बिहे गरेको १५ वर्षपछि पत्नी किरण रावसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् । आफुहरुको सम्बन्ध टुटेको बारे उनीहरुले हालै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएका थिए ।
विज्ञप्तिमा उनीहरुले आफुहरुले बिहेको १५ वर्षमा सम्बन्धविच्छेद गरेको र डिभोर्स अन्त्य नभई नयाँ जीवनको सुरुआत भएको बताएका छन् । साथै उनीहरुले आफ्ना छोरा आजादलाई मिलेर हुर्काउने पनि बताएका छन् ।
यी दुवैको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि अहिले अभिनेत्री फातिमा सना शेखको चर्चा भइरहेको छ । अमिर र किरणको सम्बन्ध विच्छेद हुनुमा फातिमाको हात रहेको चर्चा चलेको छ । आमिर पत्नीसँग अलग भएपछि सामाजिक सञ्जालमा फतिमालाई बधाईको ओइरो लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आमिर र किरणको सम्बन्ध विच्छेद हुनुमा फातिमाको ठुलो हात रहेको भन्दै बधाई दिइएको छ ।
आमिर र फातिमाले फिल्म दंगलमा एकसाथ अभिनय गरेका थिए । यस्तै फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’मा पनि आमिरले नै फतिमालाई राखेका थिए । यस फिल्ममा अमिरकै कारण फतिमाले अभिनय गर्न पाएको बताइएको छ ।
यसअघि पनि यी दुई बारे चर्चा चल्दा फातिमाले आमिर प्रेमी नभएको बताएकी थिइन् । तर आमिर र किरणबीच सम्बन्ध विच्देछ भएपछि भने यसको चर्चा बढेको छ । अहिले आमिरको वैवाहिक सम्बन्ध टुट्नुमा फातिमालाई दोषी मान्दै उनलाई ट्रोल गरिएको छ ।
आषाढ २१, २०७८ सोमवार ११:२१:४६ बजे : प्रकाशित